डेटिङ टिप्सः यी पाँच कारणले हाँसो–ठट्टा गर्ने केटा मन पराउँछन् केटीहरु
Thursday, 31 Jan, 2019 5:01 PM
१. ‘बोर फिल’ हुन दिँदैनन
हाँसो–ठट्टा गर्ने मानिसहरुको अब्जर्भेसन (अवलोकन) गर्ने क्षमता निकै राम्रो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो वरिपरिका मानिसहरु र वस्तुहरुमाथि निकै ध्यान दिन्छन् र उनीहरुबारे बुझ्छन् पनि । त्यसैकारण उनीहरु सधैं कुनै न कुनै कुराको मजाक बनाइराख्छन् । तपाईंले एकपटक त्यस्ता व्यक्तिलाई घर लैजानुहोस् त अनि हेर्नुहोस, महिनौंसम्म उनीहरुले कसरी स–साना कुरामा तपाईंको मजाक बनाइरहनुहुन्छ र तपाईं हाँसिरहनु हुनेछ ।
४. अनुहारमा हाँसो ल्याइदिन्छन
५. रचनात्मक हुन्छन